Shiinaha Carbide Carbide iyo Soosaarka Gacanta iyo Warshadda | N&D Carbide
Tungsten Carbide saxanka tubada
Tungsten Carbide Disk for Madax
API 11AX Ball iyo Kursi loogu talagalay Mashiinka 'Rod Surfface'
Tungsten Carbide Bush ee saar Bamka Korantada
Tungsten Carbide Flat Seal Ring for shaybaarada makaanikada
Tungsten Carbide Rotary Burrs oo loo habeeyay
Kartoo Tungsten Carbide Xidho Qaybo
Carbide Bush iyo Gacanta
* Tungsten Carbide, Nickel / Cobalt Fiilada
* Foornooyinka Sinter-HIP
* Mashiinka CNC
* Ballaca Dibadda: 10-500mm
* Sintered, istaandarka dhammeeyey, iyo muraayad la tumay;
* Cabbirro dheeri ah, dulqaad, darajooyin iyo tiro ayaa la heli karaa markii la codsado.
Tungsten carbide sleeve bush wuxuu muujinayaa adkaanta sare iyo xoogga dillaaca transverse, oo wuxuu leeyahay waxqabad heer sare ah oo looga hortagayo xoqida iyo daxalka, taas oo awood u siineysa in si ballaaran loogu adeegsado warshado badan.
Tungsten carbide bushing badanaa waxaa loo isticmaalaa shaabbinta iyo fidinta. Waxay leedahay astaamaha u adkeysiga xirashada iyo iska caabinta saameynta. Waa qeybaha taageerada ee loo adeegsado qeybaha farsamada, si loo gaaro xirashada, xirashada ilaalinta iyo howlaha kale. Aagaga codsiyada waalka, bushingka tungsten carbide wuxuu kujiraa qafisyada waana walxaha u nugul u adkeysiga u daweynta. berrinka codsiyada waalka, bushingka tungsten carbide-ka ayaa ku jira xarkaha waana walxaha u adkaysta daxalka ee dahaadhka.
Tungsten carbide sleeve bush waxaa loo isticmaali doonaa inta badan taageerada wareejinta, isku toosinta, ka hortagga riixida iyo shaabadda dariiqada mootada, centrifuge, ilaaliyaha iyo kalasooca bamka korantada ee ku jira xaaladaha shaqo ee xun ee xawaaraha sare ee rogista, daxalka gaaska ee aagga saliida, sida darafta sita salka, darafta mootada mootada iyo darafta dariiq dhexaad.
Shaqada ugu weyn ee shamiito tungsten carbide bush sleeve taas oo ah nooc ka mid ah carbide tungsten, ayaa ah in loo isticmaali karo inay tahay qaybta ilaalinta qalabka. Nidaamka adeegga, duugista carbide tungsten waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa xirashada udhaxeysa qalabka iyo qalabka.
Tungsten Carbide Bushes / gacmo-gacmeedyada waxaa badanaa loo isticmaalaa sida Jig Bus, Buugga Tilmaamaha, Dahaarka Flux, Xabad toogasho & meelo kale oo badan oo ah qaybta iska caabbinta ee warshadaha kala duwan. Waxaan ku siineynaa Bannaan iyo sidoo kale Tallaabooyinka Dhirta leh cabbirro kala duwan & qaabab kala duwan sida aad u baahan tahay.
Waxaa jira xulasho weyn oo ah cabirro iyo noocyo gacmeedka duudduuban ee tungsten carbide, waxaan sidoo kale kugula talin karnaa, qaabeyn karnaa, horumarin karnaa, soo saari karnaa alaabada sida ku cad sawirada iyo shuruudaha macaamiisha.
Qaab TC Bush Tixraac
Waxyaabaha Fasalka Tungsten Carbide Bush (KELIYA TIXRAACA)
Hore: Tungsten Carbide Axle Sleeve
Xiga: Tungsten Carbide Flat Seal Ring for shaybaarada makaanikada
Carbide usheeda dhexe Bushing
Sibidhka Carbide Qaadista Sleeve Bush
Sibidhka Carbide Cemented
Mashiinka Macdanta Carbide Bush
Mashiinka Tungsten Carbide Bush
Farsamada Tungsten Carbide Bush
Iftiin Tungsten Carbide Bush
Dhirta adag ee Tungsten Carbide
Tungsten Carbide Bushing usheeda dhexe Khatimidii Ring